မေးခွန်း လေယာဉ် Deisgn
1 months ago 10 တစ်နှစ် #810 by jimos
ရပ်ရွာများအတွက် concept ကိုလေယာဉ်ပျံဒီဇိုင်းနိုင်သူသည်ဤနေရာတွင်မည်သူမဆိုရှိပါသလား? ကျွန်မအတော်လေးမြင့်မားသောအမြန်နှုန်းမှာ 3500 မိုင်အကွာအဝေးကျော်ကုန်တင် / Pax တင်ဆောင်နိုင်စွမ်းကျားကန်တစ်ဦးကို Long range ကို Turbo ဒီဇိုင်းတစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာဖွေနေတာပါ။ ငါမည်သူမဆိုကျွန်တော်လူတိုင်းကိုသုံးစွဲဖို့အတှကျ rikooo က upload တင်နိုင်သည်, ငါ့ကိုသိပါစေကိုကူညီနိုင်လျှင် cant ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီး2သန်းအထက် go ထင်ယင်း၏ MTOW ဒါ Air ကို hauler3၌ဤသုံးစွဲဖို့ချင်ပါတယ်?
1 months ago7တစ်နှစ် - 1 months ago7တစ်နှစ် #952 by DRCW
မင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်မသင်အသုံးပြုနေတဲ့ရှိပြီးသားလေယာဉ်များကိုအသုံးပြုပါကကူညီခြင်းနှင့်အကွာအဝေးနှင့်သင့်လေယာဉ်ပျံများ၏မြန်နှုန်းတိုးမြှင့်ဖို့လေယာဉ် cfg ဖိုင်ကိုထိန်းညှိဖို့သင်မည်သို့ပြသနိုင်ပါတယ်။ ဘာကိုဗားရှင်းပေါ်မှာမူတည်ပါတယ်နေရာချထားရန်မီတစ် cfg ဖိုင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ဖူးဘူးဆိုပါက P3D သင်မှာ .... ရှိသည်။ ဗားရှင်း 1,2 နှင့်3အစီအစဉ်က x (86) တွင်ဖြစ်သင့် သင့်ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုအတွင်း။ သငျသညျရှိပါက P3Dv4 ကသင့်ရဲ့စံတွင်တည်ရှိသည် installed Program ကိုဖိုင်တွေဖိုလ်ဒါကို Lockheed Martin ကုမ္ပဏီအောက်မှာ။ အခုတော့ငါသည်သင်တို့၏ hauler ကျားကန်သို့မဟုတ်ဂျက်လျှင်သိရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ကကျားကန်ဖြစ်ပါတယ်လျှင်, ငါကတာဘိုဗားရှင်းလျှင်သိရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ဤအချက်အလက်မရှိရင်ငါသာဥပမာတစ်ခုအားဖြင့်သင်တို့ကိုဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်သည်ငါသည်ဤ exorcise များအတွက်စံ2အင်ဂျင်ကျားကန်ယူပါလိမ့်မယ်။ သင် Lockheed Martin ကုမ္ပဏီမှ Folder ကိုဖွင့်လှစ်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ဆင်း scroll simobjectsဒါကြောင့်ဖွင့်ပြီးတော့ကိုသင်တွေ့ပါလိမ့်မယ် လေယာဉ်ပျံs ကိုဖိုင်တွဲတစ်ခုကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်သငျသညျကိုပြုပြင်မွမ်းမံဖို့ရန်ဆန္ဒရှိလေယာဉ်ကိုရှာပါ။ သငျသညျလေယာဉ် folder ကိုဖွင့်လှစ်ပြီးတာနဲ့သင်ကဖိုင်တစ်ဖိုင်စျေးကွက်ရှိလိမ့်မည်မရွေးခဲ့ကြ လေယာဉ်ပျံ cfg . ဒီအစီအစဉ်ကိုသငျသညျအဲဒီလိုလုပ်ဖို့ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်ပါတယ်မလုပ်ပဲနေလျှင်လက်ျာဘက်ပေါ်မှာ click နှိပ်ခြင်းနှင့် 'notepad "နဲ့ဖွင့်လှစ်, သင်က cfg ဖိုင်ဖွင့်လှစ်ထားသောပထမဦးဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ် အကယ်. လုပ်နိုင်အောင်, ထို့နောက်ရုံသင်၏ desktop မှတပြင်လုံးကိုလေယာဉ်ပျံ folder ကို Click နှိပ်ပြီး drag အပြောင်းအလဲတွေ။
ဒီဥပမာကိုငါ De Havilland Beaver အဘိဓါန် DHC2 ကနေဆွဲထုတ်
သင့်ရဲ့ max ကိုအလေးချိန်ပြောင်းလဲနေတဲ့အဆင့်တဦးတည်း
max_gross_weight = 5090 // (အလေးချိန်ပေါင်) က 5090 ဖတ်နိုင်အောင် 2000 အားဖြင့် 7090 တိုးမြှင့်
empty_weight = 3410 // (ပေါင်)
engine_type =0//0= Piston, 1 = ဂျက်,2= အဘယ်သူမျှမ,3= Helo-တာဘိုင်,4= Rocket,5= တာဘိုပရော့
Engine.0 = -0.15, 0.0, ရည်ညွှန်း datum ထံမှ 0.0 // (ပေ) longitudinal, နှစ်ဦးနှစ်ဖက်, ဒေါင်လိုက်အကွာအဝေး
fuel_flow_scalar = 1.0 // ဆီစီးဆင်းမှစကေး ဒါကြောင့်ဖတ်နိုင်အောင် range ကိုပြောင်းလဲမှု 1.0 နှစ်ဆ 0.48
min_throttle_limit = 0.0 // အနည်းဆုံးရာခိုင်နှုန်းကအခိုးအငှေ့ညှိရာကိရိယာ။ တာဘိုင်ပြောင်းပြန်များအတွက်ယေဘုယျအားဖြင့်အနုတ်လက္ခဏာ
power_scalar = 1.0 // Piston ပါဝါမှစကေး
ဆလင်ဒါနှုန်း cylinder_displacement = 109.4 // ကုဗလက်မ
compression_ratio = 6.0 // Compression ကိုအချိုး
ဆလင်ဒါ၏ number_of_cylinders =9// နံပါတ်
max_rated_rpm = 2300 // မက် rated RPM
max_rated_hp = 450 // မက် HP က rated 450 ဖြစ်လာနိုင်အောင်ငါ 200 မြင်းကောင်ရေ add ပါလိမ့်မယ်ဤကိစ္စတွင်အတွက်မြင့်မားတဲ့အရေအတွက် 450 ကိုပြောင်းလဲ 650
0.415 စက္ကန့်: စာမျက်နှာကိုဖန်တီးရန်အချိန်